Oovimba bolwazi be-FAQ | Umvelisi womatshini wokufudumeza ungeno, umatshini wokuwelda we-ultrasonic
Le nkqubo ishushu isinyithi esele senziwe ngokubalaseleyo. Ukungeniswa kwe-induction kunciphisa ubunzima, kuphucula i-ductility kunye nokunciphisa uxinzelelo lwangaphakathi. Ukubamba umzimba ngokugqibeleleyo yinkqubo apho umsebenzi opheleleyo ugcwalisiwe. Ngokuthungwa komthungo (okwaziwa ngokuchanekileyo njenge-seam normalizing), kuphela indawo echaphazeleka bubushushu eveliswa yinkqubo yokuwelda.
Ukungeniswa kwe-induction kunye nokubekwa emgangathweni kuhambisa ubushushu obukhawulezayo, obunokuthenjwa kunye nobendawo, ulawulo lobushushu oluchanekileyo, kunye nokudityaniswa okulula kumgca. Ukuchithwa kuphatha umsebenzi ngamnye kwiinkcukacha ezichanekileyo, kunye neenkqubo zokulawula ngokuqhubekayo ukubeka iliso nokurekhoda yonke inkqubo.
Ukuchithwa kwe-Induction kunye nokuqhelanisa kusetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yeetyhubhu kunye nemibhobho. Ikwafaka kwakhona ucingo, imitya yentsimbi, iincakuba zemela kunye neetyhubhu zobhedu. Ngapha koko, ukwenziwa kufanelekile kuwo nawuphi na umsebenzi wokubamba.
Inkqubo nganye ye-DAWEI yokungenisa eyakhelweyo yakhelwe ukwanelisa iimfuno ezithile. Kwintliziyo yenkqubo nganye
i-DAWEI Induction Heating generator ebonisa ukulayishwa komthwalo ozenzekelayo kunye namandla ombane rhoqo kuwo onke amanqanaba amandla. Uninzi lweenkqubo zethu ezithunyelwayo zikwabonisa ukuphathwa okwakhiwe ngokwesiko kunye nezisombululo.
iindidi FAQ tags ku lathisa, ukunyuka kwamaxesha amaninzi, ukuphakama kwamaxesha amaninzi, uhlengahlengiso, ityhulo yokufakelwa, Iyintoni isilungiso sokungeniswa?
iindidi FAQ tags ukuvutha kwexesha eliphezulu, ukutyunjwa, ukutyhutyulwa komhlaba, RF yokunyanga, ukucutha, ukufudumala ukushisa
I-Impuction Brazing & Soldering Principle
I-Induction Brazing kunye ne-Soldering Principle I-Brazing kunye ne-soldering yinkqubo yokudibanisa izinto ezifanayo okanye ezingafaniyo kusetyenziswa izinto ezihambelanayo. Ukugcwalisa isinyithi kubandakanya ukukhokela, itin, ubhedu, isilivere, i-nickel kunye neealloys zazo. Yinyibiliko kuphela enyibilikayo kwaye yomeleze phakathi kwezi nkqubo zokujoyina izinto ezisisiseko somsebenzi. Isinyithi sokugcwalisa sitsalwa kwi ... Funda ngokugqithisileyo
iindidi FAQ tags ezisisiseko zokufudumala, iinqununu zokubumba, induction brazing theory, yokuqulunqwa kwemigaqo
Yintoni i-Induction Heating Coil kunye ne-Inductor?
Yintoni i-coil yokufudumeza induction kunye ne-inductor?
Intsimi yamandla ehlukeneyo efunekayo yokufudumala ukutshitshiswa kuphuhliswa kwi-coil yokufakelwa kwe-coil ngokusebenzisa ukuhamba kwe-AC (ukutshintsha okwangoku) kwikhoyili. Ikhoyili ingenziwa kwimilo emininzi kunye nobukhulu bezinto eziqhelekileyo kwisicelo esithile. Iikhoyili zinokuvela kwiikhoyili ezincinci zenziwe ngeetyhubhu zethusi ezisetyenziselwa ukufudumeza ngokucacileyo kwiindawo ezincinci kwizicelo ezifana nokutshisa kunye nokufudumala kwe-ferrule kwiindibano ezinkulu zekhoyili zethubhu zethusi ezisetyenziswe kwizicelo ezifana nokutshisa kwesimbi kunye nokufudumeza kombhobho.
Yiyiphi ukubaluleka kwe-coil yokupasa i-coil (inductor)?
Ukuqulunqwa kwecoil coil kuyinto enye yeyona nto ibaluleke kakhulu kwinkqubo yokufudumala inkunkuma. Ikhoyili yinkqubo yokwenza isiqhelo somsebenzi okanye inxalenye yendlela yokufudumala efanele, ukwandisa ukusebenza kakuhle kwenkqubo yokuhambelana nokuhambisa umbane, nokufezekisa le misebenzi ngelixa uvumela ukukhululeka ukulayisha nokukhulula inxalenye yakho.
iindidi FAQ tags coil induction, i-coil coil, inductor, yintoni i-coil induction?
yiyiphi into yokuqulunqa
Ukukhutshwa kwamanzi isebenzisa i-induction ukufudumeza iinxalenye zentsimbi ngaphambi kokuba zenziwe, okanye 'zikhubazeke' ngoomatshini bokushicilela okanye iinyundo.
Ukukhutshwa kwamanzi unamathuba amaninzi angaphezulu kubhalwa kwesithando somlilo. Isantya kunye nokulawulwa kwe-induction kuqinisekisa ukuhamba okuphezulu. Ukuchithwa kwanciphisa i-oxidation kwaye kunceda ukugcina ingqibelelo ye-metallurgical. Kwaye ekubeni utyunyulo lukhulula ukushisa okuthe ngqo, lugcina amandla. Ukulungelelaniswa nokuphindaphinda kokungeniswa kwenza kube lula ukudibanisa kwimigca yokukhiqiza.
Ukukhutshwa kwamanzi iyasetyenziswa ngokubanzi kwiimveliso zesebe kunye neziseko zokutshisa iibhentshi, imivalo kunye nemigca yokuphela. Iimpawu zivame ukuhlanganiswa Iinkqubo zokutshisa i-DaWei Induction ziquka i-aluminium, ithusi, ithusi, insimbi kunye nentsimbi engenasici.
Iintsapho ezintathu Izixhobo zokushushumbisa i-DaWei Induction ingasetyenziselwa ukufaka izicelo: Iingqungquthela ze-DW-MF, i-KGPS chungechunge. Nangona kunjalo, i-DW-MF yokufakela i-furnace iquka imodeli eyahlukeneyo eyenzelwe ngokukodwa ukuveliswa kweebhanti eziphezulu, izibonda, i-handlebars, i-bar ends, i-bolts kunye nezinto ezenziwe ngaphambili.
iindidi FAQ tags Iingeniso zokuqulunqwa kobumba, ukuqulunqwa kokuqulunqwa, Ukukhupha izixhobo zokusebenza, yintoni ukufakelwa kwe-induction, kutheni ukhetha i-bar rod rod okanye iibhentshini ngokufakelwa
Page1 Page2 Okulandelayo →